Dalka Ma Ka Samataxbixi Karaa Darandoorriga Ah: Daad Ama Abaar | JAMHURIYADDA
Home Gudaha Dalka Ma Ka Samataxbixi Karaa Darandoorriga Ah: Daad Ama Abaar
Dhammaanteenna waxaan la soconnaa dhibaatada ay fatahaadda webiga iyo daadadka sababeen gobollada Hiiraan iyo aagag kale ee dalka. Magaalada Beled Weyne ooy deggan yihiin dad ka ku dhaw nus malyuun ayaa 85% (Boqolkiida 85) guryaheeda laga barakacay, dhimasho naf, duunyo, dalag iyo hanti baaba’day.
Doon 20 ruux sidda oo gaddoontay, welina masiibada way taagan tahay si ay u badiso aafada. Beled Weyne iyo Hiiraan kuma ekaan masiibada fatahaadda. Shabeellada dhexe fatahaadda waxay aad u saamaysay: Mahaddey iyo Jowhar halkaasoo wax ka badan 10,000 hektar dalaggeeda ku baabba’ay. Sidaasoo kale aagga webi Ganaane daadadku waxay saameeyeen Doolow, Luuq, Baardheere, Bu’aale, iyo aagag kale.
Horta waxaa la og yahay in webiyada biyahooda ay badiba (In ka badan 90%) dhulka qaatan ee Itoobbiya, qeyb yarna ay kasoo galaan webiyada gobollada Gedo, Bakool, iyo Hiiraan. Haseyeeshee, daadadka iyo saameeyntooda waxaa door weyn ka qaata kororka dadka (Population increase) ha ahaato dhalashada ama u hayaanka dhulka webiyada, burburka dalka iyo dawlad la’aantii ka dambeeysay. Badida dadka waxay keentaa khasaaraha dadka iyo hantida inay bataan.
Aagga aan la deggenayn daadka saameyntiisa waa eber. Waxaa xusuus mudan in meelaha qaarkood uusan webiga ka fatihi lehayn haddii aysan dadka ulakac dhibaata aysan gaarsiin, sida qarka webigoo la jebiya carratuurka daad-celinta loogu talaggalay oo ulakac loo jeexo iyadoo ujeeddadu tahay ka faa’iidaysi gaar ahaaneed. ( In laga jeexdo far beer lagu waraabsado).
Webiga wuxuu leeyahay Qar dabiici ah oo biyahiisa celiya (Tusaale Beled Weyne qarka buuxa webiga waa 8.30 m hadday biyuhu dhaafaan xadkaas webiga wuu fatahaayaa). Qarka dabiicihga webiga oo keliya laguma hallayn karo nolosha dadka, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo hantida kale ee webiga ka ag dhaw, sidaas daraaddeed waxaa lagu xoojiyaa qarka dhisme kor u qaada qarka oo badbaadiya dadka, duunyada, iyo hantidaba. Badanaaba Soomaaliya waxaa ujeeddadan loo adeegsadaa dhisme carratuur (Earth embankment or dyke). Dabcan haddii dhulka ciriiri uu yahay sida magaalooyinka gudahooda carratuur suurtaggal ma noqonaayo markaas waxaa loo baahanaayaa dhismo derby dhagax ama shub ah.
Previous articleDevastating Floods Impact Beled Weyne Again
Next articlePUNTLAND: Xil Ka Qaadis Itus oo Itaabsii ah!